UGrover Cleveland Ubomi: umongameli wama-22 kunye no-24 waseMelika
UGrover Cleveland: UMongameli Weshumi amabini anesixhenxe kunye noMashumi amabini anesine
UGrover Cleveland wazalwa ngoMatshi 18, 1837, eCaldwell, eNew Jersey. Wakhula eNew York. Waqala ukuya esikolweni eneminyaka eyi-11. Xa uyise efa ngo-1853, uCleveland washiya isikolo ukuba asebenze aze axhase intsapho yakhe. Wathuthela ngo-1855 ukuba aphile kwaye asebenze noMalume wakhe eBuffalo, eNew York. Wafunda umthetho eBuffalo waza wavunyelwa kwi-bar ngo-1859.
UCleveland wayengunyana kaRichard Falley Cleveland, umfundisi wePresbyterian owafa xa uGrover eneminyaka eyi-16, no-Ann Neal.
Wayenodade abahlanu kunye nabazalwana abathathu. Ngomhla ka-Juni 2, 1886, uCleveland watshata noFrances Folsom emthendelekweni weNdlu eNtshonalanga. Wayeneminyaka engama-49 kwaye wayeneminyaka engama-21. Bonke babenentombi ezintathu kunye noonyana ababini. Intombi yakhe uEstere yayingumntwana kaMongameli kuphela ozalwe kwiNdlu eNtshonalanga. UCleveland usolwa ngokuba nomntwana ngaphambi komtshato noMaria Halpin. Akaqinisekanga ngokuzala komntwana kodwa wamkela uxanduva.
Umsebenzi we-Grover Cleveland Ngaphambi koMongameli
UCleveland waya kumthetho kwaye waba lilungu elisebenzayo leDemocratic Party eNew York. Waba ngumphathi we-Erie County, eNew York ukususela ngo-1871-73. Wafumana idumela ngokulwa nokukhohlakala. Umsebenzi wakhe wezopolitiko ke wamkhokelela ekubeni nguMeya weBuffalo ngo-1882. Wabe eseya kuba nguGavana waseNew York ukusuka ngo-1883-85.
Ngowe- 1884, uCleveland wamiselwa ngabaDemokhrasi ukuba baphathe uMongameli. UThomas Hendricks wakhethwa njengomlingane wakhe.
Umchasi wakhe nguYames Blaine. Eli phulo linye liyilo lokuhlaselwa ngabanye kunokuba iimeko ezihambelanayo. UCleveland wancincilela ukhetho ngo-49% wamavoti athandwayo kwaye ngelixa efumana ama-219 angama-401 angamavoti angama- 401.
UCleveland waphumelela ukutyunjwa kwakhona ngo-1892 nxamnye neNew York nenkcaso ngomshini wezopolitiko obizwa ngokuba yiTammany Hall .
I-Vice-Presidential yovavanyo lomlingane nguAdlai Stevenson. Babalekela kwakhona uBenjamin Harrison owayengumntu ongeyena owayeseCleveland elahlekelwa yiminyaka emine ngaphambili. UJames Weaver wabaleka njengomntu wesithathu. Ekugqibeleni, iCleveland yanqoba kunye nama-277 kwi-vote engama-444.
Iziganeko kunye nemiphumo ye-Grover Cleveland kaMongameli
UMongameli Cleveland nguye kuphela owayengumongameli ukuba akhonze amabini amabini angahambelaniyo.
Ulawulo loMongameli bokuqala: Matshi 4, 1885-Matshi 3, 1889
UMthetho wokuThuthukiswa koMongameli owenziwe ngo-1886 owenzela ukuba ekufeni okanye ekutyunjeni kokubili umongameli kunye no-vice-mongameli, umgca wokulandelana uza kuhamba ngekhabhinethi ngokulandelelana kwendalo.
Ngomnyaka we-1887, uMthetho we-Interstate Commerce Act wadlulisela ukudala iKomishoni ye-Interstate Commerce. Umsebenzi wekhomishina wawuwukuba ulawula amanani omzila wesitimela. Kwakuyiziko lokuqala lolawulo lombutho.
Ngomnyaka we-1887, uMthetho wama-Dawes Amanqaku ambalwa wadlulisela ukunika ubemi kunye nesihloko sokugcinwa komhlaba kumazwe aseMelika azimisele ukulahla ubuhlanga babo.
Ulawulo lwesibini loMongameli: uMatshi 4, 1893-Matshi 3, 1897
Ngomnyaka we-1893, uCleveland wanyanzelela ukurhoxiswa komnqophiso owawunamathela eHawaii kuba wayecinga ukuba iMelika yayingalunganga ekuncediseni ukutshabalaliswa kukaMfumabe uLuliuokalani.
Ngowe-1893, uxinzelelo lwezoqoqosho lwaqala ukubizwa ngokuba yi-Panic ka-1893. Izigidi zamashishini zahamba phantsi kwaye zagqitywa. Nangona kunjalo, urhulumente akazange enze okuncinci kuba wayengabonakali njengemvume yomgaqo-siseko.
Umkholi onamandla kwinqanaba legolide, wabiza iCongress kwiseshoni ukuba aphelise uMthetho weSherman Silver Purchase Act. Ngokwalesi senzo, isilivere yathengwa nguRhulumente kwaye yahlawulelwa kumanqaku malunga nesilivere okanye igolide. Inkolelo kaCleveland yokuba le nto yayijongene nokunciphisa iindawo zegolide ezazingathandwa ngabantu abaninzi kwiDemocratic Party .
Ngomnyaka we-1894, i- Pullman Strike yenzeke. I-Pullman Palace Car Company yanciphisa umvuzo kwaye abasebenzi bahamba baphantsi kolawulo lukaEugene V. Debs. Ubundlobongela buqalile. UCleveland wayala i-federal army kwaye wabamba amaDebhu ekupheleni kwesiteleka.
UCleveland wasethatha umhlala-phantsi ebukhosini obunobungqina be-politiki 1897 waza wabuyela ePrinceton, eNew Jersey. Waba ngumfundisi kunye nelungu leBhodi yeTrasti yeYunivesithi yasePrinceton. UCleveland wasweleka ngoJuni 24, 1908, yokuhluleka kwentliziyo.
UCleveland uthathwa njengabongameli bezeMelika. Ngexesha lakhe e-ofisi, wancedisa ekuqaliseni ukulawulwa komthetho wezorhwebo. Ngaphezu koko, walwa nento awayeyibona njengento yokuxhaphaza yangasese yemali. Wayeyaziwa ngokuba wenza isazela sakhe nangona kuchaswa ngaphakathi kweqela lakhe.
6 Oomongameli obhala iiincwadi ngaphambi kokukhethwa
Izinto ezi-10 eziphezulu zokumazi ngoJohn Adams
Ukhetho lwe-1800: Thomas Jefferson kunye noJohn Adams
Imiba ebalulekileyo kunye neyona nto ibalulekileyo malunga noJames Buchanan
ISebe eliLawulayo likaRhulumente waseMelika
AbaPhathi abasixhenxe baSebenza Ngeminyaka E-20 Ngaphambi Kwemfazwe Yombango
UMongameli we-Obama wokuqala woLawulo
I-20 ye-Funniest, i-Weirdest Senior Pictures ezithathiweyo
I-Anatomy Of Corn
Iindwendwe ezili-10 eziqeshwe yi-aun nacionalidad estadounidense
Iimviwo zeeNyuvesi zeNdawo zeBhola
I-8 Ininzi yokuThuthukiswa kweMihlaba iNgqinekile
Iindlela ezine zokunceda umntwana wakho abambe ukunyumba kwezindlu
Indlela Ukuzithemba Kungase Kutshabalalise I-home school yakho
Umgibeli - "Myeke Aye"
Funda nge-Essay SAT yokukhetha
UJohn Sutter, Ngubani uSawmill owaqalisa iCalifornia Gold Rush
Ubudlelwane bobuGcisa kwiMilinganiselo elinganayo Inkinga
NgoLwesihlanu Umthandazo kwi-Islam
Yonke i-Movie Superman I-Actor eyayidlala kwi "Smallville"
I sibini iCongo yeMfazwe
Yonke Efuna Ukwazi NgobuGuquleli obuGqabini
Izixhobo ze-MCAT ezifanele ukukhuphela
Amazwi anomdla malunga noLaura Ingalls Wilder
Yiyiphi "isiKhokelo" soMpu okanye iGund?
IYunivesithi yaseWisconsin iGreen Bay Admissions
Iingxaki zeLizwi leMat Math zeHalloween